Eksaody 21 - Ny Baiboly
Eksaody toko 21
Lalàna maro samihafa - Sazin'ny heloka sasany.
1Izao no lalàna homenao azy ireo: 2Rahefa hividy mpanompo hebrio hianao, enin-taona no hanompoany, fa amin'ny taona fahafito dia hiala izy ka afaka tsy mando na inona na inona. 3Raha izy irery no niditra dia izy irery no hiala; raha niaraka tamim-bady izy dia hiara-miala aminy koa ny vadiny. 4Raha ny tompony anefa no nanome vady azy, ka niteraka lahy amana vavy taminy izy dia an'ny tompony ravehivavy sy ny zanany, fa izy kosa dia honjohonjon'izy irery no hiala. 5Ary raha ny mpanompo kosa no manao hoe: Tsy mahafoy ny tompoko sy ny vady aman-janako aho, ka tsy te-ho afaka, 6dia ho entin'ny tompony ho eo anatrehan'Andriamanitra izy ka hasainy miolotra ny varavarana na ny tolam-baravarana, ary hotevehiny amin'ny haolo ny sofiny, dia ho mpanompony hanompo azy mandrakizay izy. 7Raha misy lehilahy mivaro-janakavavy ho mpanompon'olona dia tsy mba ho toy ny an'ny andevolahy ny fahafahany, 8fa raha ilay tompony izay nihevitra azy ho an'ny tenany no tsy tia azy dia havelany havotana izy; fa tsy ho azony hamidy amin'olon-kafa nony efa nivadihany. 9Raha ny zanany lahy no kasainy homena azy dia hoentiny araka izay tsy maintsy ho fitondra ny zanakavavy izy. 10Ary raha mbola maka vehivavy hafa izy dia tsy misy azony ahena ny fanome an-dravehivavy voalohany, na ny momba ny sakafo, na ny momba ny fitafiana, na ny momba ny hanina. 11Ary raha tsy tanterahiny aminy ireo zavatra telo ireo dia mahazo miala fotsiny izy, fa tsy handoa vola akory.
12Izay mamono mahafaty olona dia tsy maintsy atao maty. 13Nefa raha tsy nanao otrika taminy izy, fa tolotr'Andriamanitra no nahavoazan'ny tànany azy dia hoferako aminao izay toerana hahazoany ialofana. 14Fa raha misy kosa lehilahy nanao an-kasomparana amin'ny namany hamonoany azy an-kafetsena, na mby eo amin'ny oteliko aza, tsoahy eo ka vonoy ho faty. 15Izay mikapoka ny rainy na ny reniny tsy maintsy atao maty. 16Izay mangalatra olona, na namidiny izy io, na tratra eo an-tànany, dia tsy maintsy atao maty. 17Izay hanozona ny rainy na ny reniny dia hoheloin-ko faty.
18Raha misy olona mifanditra ary asian'ny iray vato na totohondry ny namany, nefa tsy nahafaty azy, fa nampihonaka am-pandriana azy izany, dia ho afaka ilay namono, 19raha manaritra ny anankiray ka afa-mitsangantsangana any ivelany miankina amin'ny tehina; nefa kosa tsy maintsy onerany ny andro tsy niasany ary hiantohany ny fitsaboana azy.
20Izay mikapoka hazo ny andevolahiny na ny andevovaviny, ka mahafaty azy eo no ho eo, dia hovaliana tokoa. 21Fa raha mbola velona indray andro na indroa andro ihany izy, dia tsy hovaliana izy, satria an'ny tompony ihany io.
22Raha misy olona miady ary mandona vehivavy bevohoka; ka teraka azon'izany ravehivavy nefa tsy maninon-tsy maninona izy, dia izay onitra ilain'ny vadiny sy didian'ny mpitsara haloa ihany no ho sazin'ilay diso. 23Fa raha misy loza mihatra kosa dia hasainao hoefain'aina ny aina, 24efai-maso ny maso, efai-nify ny nify, efain-tànana ny tànana, efain-tongotra ny tongotra, 25efain-dotra ny voadotra, efain-dratra ny ratra, efai-mangana ny mangana.
35Raha misy ombin'olona manoto ombin'olon-kafa ka mahafaty azy, dia hamidin'izy ireo ny omby velona, ka ny vidiny hozarainy, ny omby maty koa hozarainy. 36Raha fantatra anefa fa efa mpanoto hatramin'ny ela ilay omby fa tsy nitandrina azy ihany ny tompony, dia hanonitra izy, hefainy omby ny omby, fa ny omby maty no ho azy. >